Naya Post Nepal | काठमाडौको यी ठाउँ: जहाँ पुरुष खो’ज्न स्कुटरमा आउँछन् युवती !
काठमाडौको यी ठाउँ: जहाँ पुरुष खो’ज्न स्कुटरमा आउँछन् युवती !
राजधानीवासी दिउँसो समयमा धुलो, धुँवा र ट्रा’फिक व्यवस्थापनको स’मस्या’ झे’लि’रहेका छन्। फोहोर, धुलो, धुँवा र ट्राफिक समस्याको चाङले थिचिने काठमाडौंको रा’त्रि’कालीन अवस्था पनि वि’कृ’ति’ज’न्य क्रि’या’कलापले भरि’एको छ।
रा’तिमा काठमाडौंलाई नि”याँ’ल्दा विभिन्न प्रकारका वि कृ’तिको चा’ङ फे’ला पारेको छ । नि’ग’रा’नीका क्रममा भेटिएको यस्तो संवादले नै पुष्टि गर्छ, राजधानीमा रात्रिकालीन समयमा हुने वि कृ’ति’ज’न्य कार्य ‘जाने हो?’ स्कुटर घ्या’च्च रोकियो ।
जो कोहीलाई पनि प्रभावमा पार्ने जिउडाल, अ र्ध’न ग्न प’हिरन र आग्रहले एकैछिन अ’ल’म’लमा पाथ्र्यो । एकछिन बा’र्गे’निङ भयो र एक ग्राहक तिनै युवतीको स्कुटरमा चढे र लागे ह्या’प्पी फ्रा’इ’डे मना’उन । रातको १० बजेको छ । ठमेल आसपास धेरै यौ न कर्मी महिला र तेस्रो लिं गी स’लबलाउन था’लिसकेका छन् ।
डा’न्स बार, पव, डिस्को र दोहोरीमा विदेशीभन्दा नेपाली युवायुवतीकै चहलपहल बढी देखिन्छ । झन्डै रातभरजस्तो डान्स बार, पव, डिस्को र दोहोरीभित्र रंगिन संसारमा मस्त बन्ने ठमेल सुस्ताउँदै जाँदा बाहिर अर्को माहोल बनिसक्छ।
प्रहरीले यसबारे ज’नगु’ना’सो बढेपछि छु’ट्टै योजना अ परेसन नै चलाएर रात्रिकालीन व्यवसायमा बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने र यस्ता मनोरञ्जनका नाममा प्रवेशमा क’डा”इ गरेको थियो । यस्तो भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही हुने तथा किशोर किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिई सचेत गराउने तथा अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरिएको छ।
यौ न”क’र्मी महिला तथा तेस्रो लिं गीको बिगबिगी छ । कोही नयाँ देख्नेबित्तिकै उनीहरू नजिक पुग्छन् र टाँसिँदै बार्गेनिङ सुरु गरिहाल्छन्
रत्नपार्क आसपास राती ९ बजे कानमा ठोकिएको आवाज हो यो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलगायत रत्नपार्क क्षेत्रमा य’सैगरी बा’र्गे’निङ चलिरहेका छन् अर्थात् जवानीको मोल”तोल यसरी नै भइरहेछन्। यौ नकर्मी महिला तथा तेस्रो लिं’गीको बिगबिगी छ । कोही नयाँ देख्नेबित्तिकै उनीहरू नजिक पुग्छन् र टाँ’सिँदै बा”र्गेनिङ सुरु गरिहाल्छन् । केही अ’स’ह”ज जवाफ आउने’बि’त्तिकै गा”ली गर्न थाल्छन्।
काठमाडौंको रा’त्रिका’लीन स’मयलाई लिएर अनेक च”र्चा परिचर्चा चल्ने गरेका छन् । विशेषगरी यौ नकर्म र अ प राधले भरिएको राजधानीको रात्रिकालीन समय पछिल्लो समय म’नो’रञ्जनको माध्यम बन्न पुगेको छ। भीआईपीको दबदबा रहेको दरबारमार्ग क्षेत्र, बसपार्क, चाबहिललगायतका स्थानका रात्रिकालीन व्यवसायसमेत अधिकांश नेपाली युवायुवतीले नै धानेको देखिन्छ ।
एकैछिन फुटपाथ वा त्यस क्षेत्रमा कोही उभिनु मात्रै पर्छ, यस्ता धेरै अफर आइपुग्छन्। यौ कर्मीहरूले स्कुटी लिएर विभिन्न होटल, अर्पाटमेन्ट र डेरामा पुर्याएर ध न्दा चलाउने गरेको देखिएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ। फिचर फोटोः गुगलबाट
२०७८ पुष १४, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 482 Views